Creative Omni, isithethi seWiFi ngexabiso elihle | IPhone iindaba
Creative Omni, isithethi seWiFi ngexabiso elihle
ULuis Padilla | | Izixhobo ze-IP, Ezahlukeneyo
Ukufumana isithethi esivumelana nesandi kunye neepotifoliyo ozikhethileyo ayingomsebenzi olula, kwaye mbi nangakumbi xa ufuna ukuba nenqaku elisasilela nanamhlanje: Unxibelelwano lweWiFi. Sekuyiminyaka emininzi olu hlobo lwetekhnoloji kwizandisi-lizwi kodwa kuninzi lwamatyala lubekelwe iimodeli zokugqibela. ngamaxabiso aphezulu kakhulu.
Kuko konke oku kuyilwa kubethe isikhonkwane entloko kunye nesithethi sakwa-Omni: Umgangatho olungileyo kunye nokunxibelelana kweWiFi ngexabiso elinazo, ngakumbi izithethi zeBluetooth. Eboniswe kwi-IFA 2017, esi sithethi sinamagumbi amaninzi silungele ukuzitotosa ngale Krisimesi okanye ujongeke kakuhle nomntu oyifaneleyo.
1 Isilumko, uyilo olunendawo ezimbini
2 Iinkonzo ezihlanganisiweyo kunye neAirPlay
3 Umgangatho ophezulu wesandi
Isilumko, uyilo olunendawo ezimbini
Ifumaneka ngombala omnyama nomhlophe, sisithethi esinobuqili kakhulu, ngaphandle kwempumelelo enkulu okanye imibala eqaqambileyo. Zintathu ii-LED kwindawo ephezulu engabonakaliyo kwaye umphambili uhleli ngokupheleleyo kwisithethi sesithethi. Unethuba lokuyisebenzisa kwiindawo ezimbini: nkqo kwisandi se-3D kunye nokuthe tye kwisandi esiqhelekileyo sestereo. Ngokwam, ndiyithanda ngokuthe nkqo ngokuthe nkqo kwi-aesthetics, kodwa andikwazi ukuxelela umahluko kwisandi phakathi kwesithuba esinye nesinye.
Ngaphandle kokwenza uyilo "olungeyomdlalo" xa kuthelekiswa nezinye izithethi ezifanayo (akunakuphepheka ukuyithelekisa ne-UE Boom 2), le Creative Omni iyamelana nokutshiza, ukuze ukwazi ukuyikhupha ngaphandle kweengxaki, ibeke kufutshane ichibi okanye ukonwabele umculo kwigumbi lokuhlambela. Enkosi ngonxibelelwano lwayo lweWiFi, naphina apho unogubungela kwinethiwekhi yakho yasekhaya ungonwabela umculo wakhoNokuba yeyiphi na ikhompyuter yakho, i-iPad okanye i-iPhone. Ewe ikwanayo neBluetooth ukuba ufuna ukuyisebenzisa ngendlela eqhelekileyo. Unokudibanisa izithethi ezibini ukonwabela istereo sokwenyani.
Iinkonzo ezihlanganisiweyo kunye neAirPlay
Ngokunxibelelana ngokuthe ngqo kwi-intanethi kwesi sithethi se-Creative Omni ikuvumela ukuba uyisebenzise ngokuthe ngqo ngeenkonzo ezinje ngeSpotify, iHeart Radio okanye iTidal. Ukusuka kwisicelo sokuyila onaso kwifayile ye- Ivenkile yosetyenziso (kunye noGoogle Play) ungabanika ukufikelela kwezi nkonzo. Unokulawula iSpotify kuso nasiphi na isixhobo esinomsebenzi wolawulo olukude enikwa sona yiSpotify. Ewe kunjalo, kuya kufuneka ubenenkonzo yeNkulumbuso ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngale ndlela. Ukuba ungumsebenzisi we-Apple Music, ungakhathazeki, kuba nangona inkonzo ingadityaniswanga kwi-app, ungasoloko usebenzisa i-AirPlay ukudlulisa umsindo kwi-iPhone yakho, i-iPad, iMac okanye iApple TV kwisithethi.
Apho ubuGcisa kufuneka buphucule kuyilo lwesicelo sayo, kuba ihlwempuzekile, ukongeza ekubeni ayilungelelaniswanga kwiscreen se-iPhone X. I-Creative Omni ikwavumela umsebenzi weMultiRoom: qhagamshela zonke izithethi onazo ekhaya ukuya Inethiwekhi yeWiFi kunye nolawulo lwento edlala kuzo zonke. Ungahamba-hamba endlwini wonwabele umculo naphina kuwo. Into esingayaziyo kukuba iya kuhambelana ne-AirPlay 2, Inguqulelo entsha yeprotocol ye-Apple eseza kuza, ke siza kuyilinda.
Umgangatho ophezulu wesandi
Njengoko benditshilo ngaphambili, esi sithethi sinokuthelekiswa kuyilo kunye nexabiso kwi-UE Boom 2 eyaziwayo, nangona eyokugqibela inonxibelelwano lweBluetooth kuphela. Kungenxa yoko le nto xa ndithetha ngomgangatho wesandi ndibathelekise ngokuthe ngqo ngokuba nazo zombini. Isandi siyafana, siziindaba ezimnandi zeOnni yoBuchule, kwaye ndingabeka emngciphekweni wokuqinisekisa ukuba nokuba kukho into ephezulu, nangona oku kunokuchaphazeleka kukunxibelelana kweWiFi, okunika umgangatho ophakamileyo kuneBluetooth. Le Creative Omni ineebass ezilungileyo kakhulu kodwa ayizifihli ezinye izandi kuwe, kwaye uve kuphela ubugqwetha kunye nevolumu enyusiweyo, ephezulu kakhulu ngoko ke akufuneki ukhathazeke kuba awusoze ufike kwelo nqanaba.
Ukudibanisa kunye neBluetooth endala kunye nokuxhumeka kweWiFi ungaqhagamshela i-microSD ngasemva ukuya kuthi ga kwi-32GB, kwaye inegalelo elincedisayo, ke unokumamela umculo ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi. Kweso sithuba sinye uya kufumana ikhonkco yokutshaja ye-microUSB. Ngasemva kwesithethi uyakufumana ulawulo lokudlala kunye nonxibelelwano lweBluetooth kunye neWiFi.
Ngoyilo, iinkcukacha kunye nomgangatho wesandi awuyi kufumana isithethi esifana neso sixabisa ukuba yintoni le Omni yoyilo. Ubuchule buwenzile umsebenzi omkhulu kwesi sithethi, kwaye sibubeke kuluhlu lwamaxabiso apho lungayi kubakho khuphiswano. I-Omni yoyilo inexabiso le- € 117 en AmazonKwaye ngelixa ezinye izithethi ezikwelo xabiso zinokubonelela ngomgangatho ofanayo wesandi, akukho namnye unonxibelelwano lweWiFi kunye neAirPlay. Ukuzimela kwayo kweeyure eziyi-8 kunye nokusebenzisa i-MicroSD ukuyisebenzisa ngokuzimeleyo kukwahlula amanqaku kakhulu kwaye kuyenza ibe yenye yezona modeli zigqibeleleyo kwintengiso kolu luhlu lwamaxabiso.
Uyilo olunengqiqo nolwanamhlanje
Idlalwe ngokudibana neWiFi ehambelanayo
Igalelo elincedisayo kunye ne-microSD ukuya kuthi ga kwi-32GB
Isicelo esibi kuyilo
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » Creative Omni, isithethi seWiFi ngexabiso elihle
I-Runtastic squats PRO: Iimpundu, simahla ixesha elilinganiselweyo
I-Apple ihlala isebenza ekwenzeni izixhobo zayo i-100% kwizinto ezisetyenzisiweyo